Inona no mahasoa amin'ny vovoka maitso ho an'ny vatan'ny vehivavy?
Inona no ilaina amin'ny zana-trondro maitso ho an'ny fahasalamana sy ny hatsaran-tarehy?
Isaky ny vanin-taona, dia misy tongolobe maitso maitso, izay misy tsiro malazo. Maro no misavoritaka noho ny tsiranoka mahasorena izay mijanona aorian'ny famoahana ny legioma, saingy raha fantatrao hoe inona ny zavamanitra maitso dia ilaina ny fofona. Manoro hevitra ny dokotera amin'ny fampiasana ny vokatra eo anatrehan'ny aretina isan-karazany.
Zana-trondro maitso - toetra voajanahary
Ny tombotsoa azo avy amin'ny legioma dia efa fantatra mihoatra noho ny roapolo taona ary ny fananana dia azo lazaina ho ela be.
Ny solonora dia misy solifara, izay miteraka ny fisian'ny fananganana fananganana fitaovam-piadiana, ary ny tongotra maitso dia mety ho fisorohana ny fihenanana ny tavy kodiarana ary ny fivelaran'ny arthris.
Ny fikarakarana ireo zanaona maitso dia tsara ho an'ny vatana, tsara ny manamarika fa noho ny fisian'ny fosafosana dia mampihena ny mety ho voka-dratsin'ny karia sy ny bakteria isan-karazany. Na dia efa nandritry ny 2-3 minitra aza ny volon'izy ireo. Afaka mamono ny mikraoba rehetra ao am-bava, eo amin'ny tendany sy amin'ny molotra ianao.
Voalohany, tokony ho lazaina momba ny fiantraikan'ny zana-kiraro maitso eo amin'ny fahasalaman'ny lehilahy, noho izany dia mampihena ny mety hisian'ny marary maromaro amin'ny rafitra fitsaboana. Izy no aphrodisiac mahery, manampy amin'ny fanamafisana ny libido lahy.
Ao anatin'io legioma io dia misy zavatra tsara ho an'ny fahasalaman'ny maso ary manohana ny fisian'ny katarakta sy olana hafa izy ireo.
Ny fampiasana zanaona maitso dia mifandray amin'ny fisian'ny antioxidants, izay manakana ny fitomboan'ny sela homamiadana. Ny ascorbic dia miady amin'ny hetsika radikaly malalaka, izay mampihena ny mety hisorohana ny fivontosana maloto.
Manana fiantraikany tsara amin'ny asan'ny rafi-pitabatabana izy, manampy amin'ny fandeferana tsara kokoa ny toe-javatra mampihetsi-po sy miady amin'ny tsy fahitan-tory.
Ny legioma dia mandrisika ny asan'ny tsinay ary manampy amin'ny fanesorana ny fihenam-bidy. Manatsara ny rafi-pandaminana.
Ny mineraly sy ny vitaminina amin'ny tongolo girika dia mahasoa amin'ny fisian'ny aretina avy amin'ny fo sy ny rafi-pihariana. Amin'ny fampiasana tsy tapaka dia azo atao ny manatanjaka ny rindrin'ny sambo ary manitsy ny asan'ny organ.
Ny Phytoncids hita ao amin'ny oils tena iankinan'ny zavamaniry dia afaka miditra amin'ny vatana mandritra ny fofonaina, izay manampy amin'ny fiatrehana aretina. Mba hanaovana izany, dia matetika no mampihetsika ny fofon'ny volo maitso maitso.
Hatramin'ny taonjato tranainy dia ampiasaina mba hanamafisana ny fanasitranana ny ratra sy ny aretin-kozatra.
Ny mahasoa ny zana-kiraro maitso dia miaina amin'ny fahafahany manamaivana ny fitepoka, satria voajanahary ara-dalàna ny refin'ny rano amin'ny sira.
Zavona mena - fanangonana
Ny olona dia nahatsikaritra ny toetra mahasoa zebavy maitso nandritra ny fotoana lava, ary aorian'ny fotoana fohy dia natao ny fianarana ary ny fametrahana ny singa simika. Voalohany aloha dia ilaina ny mamantatra ny vitaminina amin'ny tongolo gasy, ka ao amin'io vokatra io dia misy vitamina A, C sy vondrona B. Misy ny pyridoxine, ny tocopherol, ny choline, ny fibreuse ary ny asidra fetsifetsy tsy manasitrana. Ao amin'io vokatra io sy ny mineraly, ohatra, magnesium, potassium, sodium, phosphorus ary maro hafa. Ny zoma maitso dia manankarena amin'ny flavonoids, phytoncides, oils essentiales et chlorophyll.
Fanasitranana zavamiaina maina
Ny firafitry ny sakafo mahavelona dia miteraka karazan'aretina maro isan-karazany. Mba hahatsapa azy ireo eo amin'ny tenanao, dia mila mampiditra azy ao anatin'ny sakafo ianao. Zava-dehibe ny mandinika fa amin'ny toe-javatra sasany dia mety ho mifanohitra ny legioma mirehitra. Ny famaritana ny zavatra ilaina amin'ny zanao maitso ho an'ny vatana, dia tsara ny manonona ny antipiretsy, ny marefo, ny antibacterial ary ny antifungo. Ampiasao amin'ny fomba fitsaboana maro amin'ny fitsaboana nentim-paharazana.
Green tongolo ho an'ny aty
Ny legioma mamy sy marefo dia mety hisy fiantraikany roa eo amin'ny aty, izany hoe, amin'ny lafiny sasany, ilaina, ary amin'ny sasany, mifanohitra amin'izany, dia mifanohitra izany. Ny endriky ny zana-kofehy maitso dia mampiseho ny fihoaran'ny kôleretika eo amin'ny vatana, noho izany dia soso-kevitra ny hampiasa azy io ho an'ny staceis général. Ilaina amin'ny fifehezana ny dingan'ny fananganana kolikoly izany. Tsara homarihina fa manana fananana mampikorontana ilay onion-maitso, noho izany dia tsy mifanentana amin'ny aretina ateraky ny areti-maso (hepatita sy cirrhosis) izy, noho izany dia tsara kokoa ny mandao izany.
Zana-trondro misy diabeta
Ny fandinihana dia nahita fa misy sakafo izay misy fiantraikany amin'ny siramamy ao amin'ny rà. Anisan'izany ireo zana-vôla maitso, izay misy solifara, ary io tsiranoka io dia mampitombo ny isan'ny insuline. Ireo tongolobe mena dia mahasoa amin'ny diabeta karazana 2 noho ny fisian'ny chlorophyll, izay natao hetsika hanatsarana ny rafitry hematopoiesis. Ny zavatra hafa mahasoa ao amin'ny legioma dia chromium, izay manara-maso ny haavon'ny siramamy ao amin'ny ra ary mitazona ny fivoahana sy tsikelikely ny glucose amin'ny hozatra sy ny sela.
Zana-trondro maina miaraka amin'ny fihokoana
Ny dokotera dia manoro hevitra ny olona mijaly noho ny fitomboan'ny tosidra, mandinika ireo lovia misy zana-zye mainty, na mihinana legioma salady. Izany dia hazavaina amin'ny hoe misy contains allicin izy io, izay mampihena ny hentitra amin'ny fantson-dra, izay manampy amin'ny fampihenana ny tosidra. Ny mpahay siansa dia nanamarina fa misy tongolo gony mahasoa eo ambany fanerena, saingy hita ihany koa fa mampihena ny mety ho fisian'ny rà mandriaka izy io ary misy fiantraikan'ny fibrinolytika, ary izany dia manampy amin'ny fisorohana ny fisian'ny aretim-po sy aretim-po.
Amin'ny ririnina, ny vatany dia tsy mahavelona ireo sakafo mahavelona, ​​ka raha azo atao, dia asaina mampiditra zana-trondro maitso ao amin'ny menuo. Hitan'ny mpahay siansa fa tena marary mafy ireo olona maniry io legioma io. Ny fikarakarana ny zana-kiraro maitso, dia ilaina ny manondro ny fisian'ny phytoncides, izay miaro ny vatana amin'ny fanafihana virosy sy bakteria. Ny mpahay siansa dia nanapa-kevitra fa ity vokatra ity dia manana ranon-javamaniry maromaro izay manohana ny asan'ny rafitra immune.
Ahoana ny fampiasana zirona maitso ho an'ny vehivavy?
Ampiasao ny legioma amin'ny fomba fitsaboana amin'ny fomban'ny olona mba hanatsarana ny toetry ny volo, ny fantsika ary ny hoditra. Raha liana amin'ny zavatra ilaina ho an'ny zana-kiraro maitso ianao, dia ilaina ny mahafantatra fa tokony homen-danja ny vehivavy.
Ny firafitra dia misy vitamin B9, izay zava-dehibe amin'ny fiandohan'ny fotoam-piainana. Miaraka amin'ny tsy fahampiana azy dia mihamitombo ny tahan'ny fialam-boly sy ny fampiroboroboana ny tsy fahampian-tsakafo.
Ny tombotsoan'ny zana-kiraro maitso ho an'ny vehivavy eo amin'ny toerana dia ny fiantraikany mahasoa amin'ny fiarovana, izay manampy amin'ny fiarovana amin'ny viriosy sy ny aretina isan-karazany.
Zava-dehibe amin'ny faharoa fahatelo amin'ny famaranana ny habetsaky ny zebra izay nodorana, mba tsy hamitahana ny fampivoarana ny tsy fahampiana amin'ny zaza.
Tsiranoka maivana avy amin'ny akne
Io zavamaniry io dia misy zavatra tena ilaina, ka azo ampiasaina amin'ny masinina ao an-trano mba hiatrehana olana samihafa. Amin'ny fampiharana tsy tapaka ny hoditra maitso, ny dingan'ny fanavaozana ny sela dia mavitrika, ny fatran'ny aretin-tsolika dia nesorina ary ny sakafo sy ny fanasitranana ny hoditra dia mitranga. Ankoatr'izay, ny saron-kiran'ny zanaona maitso ho an'ny tarehy dia hanampy amin'ny fiatrehana fifandonana, noho ny fisian'ny antiseptika. Manana fanamafisana ihany koa izy io.
volon'ondry - 1 tbsp. sotro;
jolk - 1 pc.
Vonoina ny tongolo maina sy ny jono amin'ny homamiadana.
Apetaho eo amin'ny tavanao ilay fitambarana mba hamoronana horonantsary matevina. Rehefa maina ny masony dia sasao amin'ny rano mafana.
Ho an'ny tanjona kosmetika, afaka mampiasa ny legioma ianao ary hanatsara ny toetry ny volo.
Anisan'izany ny enzyme, manampy amin'ny fitomboan'ny fitomboana sy ny fahalemena.
Ny tsiranoka maivana avy amin'ny fihenan'ny volo dia mahomby, satria ny zavatra ilaina dia mihetsika eo amin'ny milina ary manamafy azy io.
Aorian'ny fivoasana voalohany dia tsikaritrao fa nanjary mamirapiratra sy mangina ny tady.
Ny jasaky ny legioma dia miantraika amin'ny toetran'ny hodi-doha, manasitrana sy manamaivana izany. Mampiasa saron-tava ianao, tsy afaka ny hatahotra ny pentch.
zana-menaka - 2 tbsp. lovia kely;
tantely - 2 tsm.
Vonoina daholo ny zavatra rehetra ary atsipazo ao anaty fakany.
Apetaho ilay sarimihetsika ary tanterao ilay saron-tava mandritra ny adiny iray.
Mba hiatrehana ny fofona tsy mahafinaritra izay mijanona eo amin'ny volo aorian'ity dingana ity dia ilaina ny mandefasana rano 4 litatra amin'ny rano iray litatra. voankazo misy vinaingitra na sotrokely. Aorian'ny fisasana ny saron-tava dia esory ny volo amin'ny vahaolana voaomana.
Zana-kiran'ny menaka tsy misy lanjany
Raha misy faniriana ny manjary mavesatra, dia tokony hampidirina ao amin'ny tongolo maina, izay manampy amin'ny famerenana ny metabolisma, ary noho ny fibre dia manadio ny vatana amin'ny toaka sy ny poizina. Misy tongolo gony maina ho an'ny fahavoazana mavesatra ary noho ny voka-dratsiny ambany kalorie, ka amin'ny 100 g fotsiny dia 19-20 kcal. Ny legioma dia manasitrana ny vatana amin'ny sakafo mahavelona izay manan-danja mandritra ny fotoana fisakafoanana. Zava-dehibe ny tsy mahafantatra afa-tsy izay ilaina amin'ny tongolobe maitso maitso, fa koa ny fomba ampiasàna azy tsara:
Azo atao ny manampy ireo volom-borona maitso ho an'ny salady, snacks, ary koa ny lasopy na ny boaty.
Ny voka-tsoa azo ampiasaina tsara kokoa, ny sakafo aroso miaraka amin'ny tongolobe dia dity menaka.
Misy legioma tsara kokoa amin'ny endrika vaovao, satria rehefa vita ny fampiasana hafanana dia misy voka-dratsy mahasoa.
Zavona menaka amin'ny hormonina
Raha eo amin'ny tsiranoka amin'ny moka marea dia zava-dehibe ny fisafidianana ny vokatra ho an'ny sakafo. Ny tongolo dia misy voka-tsoa izay mampisy herisetra mampatahotra, izay vao mainka mampihorohoro ny toe-pahasalamany, noho izany dia tsara kokoa ny mandà ny volony maitso mandritra ny vanim-potoana mihatra. Raha ny tohin'ny famotsoran-keloka, ilaina ny fanadihadiana dokotera eto, satria be dia be ny fampiasana zirona maitso ho an'ny vatana, ary tokony hampidirina ao anaty sakafo izy io, raha kely dia kely ny vokatra ary tokony hodorana aloha.
Zana-trondro mainty misy pancreatitis
Ny fanaintainan'ny pancreas dia mety ho, toy ny amin'ny dingana famotsoran-keloka, ary mandritra ny dingan'ny fangirifiriana. Amin'ny tranga voalohany, ny dokotera dia ahafahana mampiditra ny sakafo ara-tsakafo, izay ahitana zana-kirana maintso, izay nafanafana tamin'ny hafanana, noho ny habetsahan'ny ranonorana. Ny fikarakarana ny zavatra ilaina amin'ny zôka maitso amin'ny pancreatitis, dia tsara ny manamarika fa ny legioma kely dia avela hitranga raha misy ny fikorontanan'ny metabolisma kôperata. Mety hampihena kely ihany aza ny haabon'ny glucose.
Ao amin'ny aretin'ny pancreas, ny fampiasana an'io zavamaniry ho an'ny sakafo io dia mety ho lasa mihamangatsiaka ny toe-pahasalamany, indrindra raha ampiasaina rehefa mihamitombo ny dingan'ny fanindroany. Izany dia noho ny fisian'ny fanafody fanosihosena goavana dia miteraka fitomboan'ny sehatry ny sira sy ny pancreatic. Anisan'izany ny cellulose, mampiroborobo ny gassing, izay miteraka fahatsapana mampangirifiry.
Inona avy ireo vitamina amin'ny ampongabendanitra?
Peanut butter - mahasoa sy mampalahelo
Plum - votoatin'ny kaloria
Birch Juice - Properties Useful
Kitapo misy kitapo vita amin'ny biriky
Mitsangana amin'ny atody Pakany amin'ny tanany manokana
Fashionable Bangs 2017 - ny endriny kanto indrindra amin'ny bangs
16 karazany indrindra ny selfies
Diloilo volom-boninkazo ho an'ny tarehy
Fandaharam-pikarakarana ao amin'ny efitrano
Tora-kazo amin'ny parquet